Ndị Nokia 5.1 na Nokia 2.1 rutere na Spain | Gam akporosis
A na-arụ ọrụ Nokia 5.1 na Nokia 2.1 na Spain
Nokia bụ otu n'ime ụdị ndị ama ama na Europe. Lọ ọrụ ahụ abanyelarịrị na ise kacha mma na-ere ahịa na kọntinent ahụ, ha na-aga n'ihu ịmalite ekwentị ha, na nke a na Spain. Ebe ọ bụ na ụdị abụọ nke ụlọ ọrụ ahụ abanye na Spain. Ndi a bu Nokia 5.1 na Nokia 2.1
Anyị na-achọta ekwentị abụọ dị n'etiti, nke na-abịa iji mee ka etiti ụlọ ọrụ ahụ mezue. Ihe abụọ a Nokia 5.1 na Nokia 2.1 nwere ezigbo nkọwa ha na-apụ apụ maka nnukwu batrị, nke ga-enye ọtụtụ nnwere onwe.
Nokia 2.1 dị ọnụ ala ma dịkwa mfe karịa ụdị abụọ ahụ na-na-oru na Spain. E gosipụtara ya n'ụzọ iwu ọnwa ole na ole gara aga, dị ka etiti etiti na ihuenyo 18: 9. Yabụ isonye na ngosipụta a iso otu n'ime usoro ahịa. O pụtakwara na batrị 4.000 mAh ya, nke ga-enye ndị ọrụ nnukwu nnwere onwe.
A na-ewepụta Nokia 2.1 a na Spain na agba dị iche iche. Ndị na-eri ihe ga-enwe ike ịhọrọ nchikota agba abụọ: acha anụnụ anụnụ / ọlaọcha ma ọ bụ isi awọ / ọla ọcha. Ha bụ ndị ị nwere ike ịhụ na onyonyo dị n’elu, yabụ enweghị ịtụnanya na nke a. Ọ bịarutere na mba anyị na ọnụahịa nke euro 119.
N'aka nke ozo anyi choputara Nokia 5.1, nke bu ihe zuru oke karie. Ọ dị n'otu ihe omume ahụ karịa ụdị gara aga, ma kesaa ihuenyo 18: 9 na nhazi. Ọzọkwa, o nwere atụmatụ dịka NFC.
A malitere Nokia 5.1 a na Spain na ọnụahịa nke euro 199. Yabụ na ọ nwere ọnụahịa dị oke ọnụ maka ekwentị etiti. N'okwu a, agbapụtara ya na agba abụọ, acha anụnụ anụnụ na ụda ọla kọpa. Site taa ị nwere ike ịzụta ekwentị abụọ a na eze, ma n'ụlọ ahịa anụ ahụ yana n'ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A na-arụ ọrụ Nokia 5.1 na Nokia 2.1 na Spain
Nkata ụdị ihe ọ bụla na GarbageDay, ma ọ bụ ụbọchị ahihia